Paradaịs sitere na ekeresimesi: mmemme nke Saint Nicholas - Afrikhepri Fondation
Lya oriri nke Saint Nicholas, nke a na-eme na mgbede nke Disemba 5 na ụbọchị nke Disemba 6, bụ ihe ọtụtụ ụmụaka nọ na North na East nke France, na Belgium, na Luxembourg, Netherlands , na n’akụkụ ụfọdụ nke Germany, Austria na Switzerland. Ọ na - ewepụta ndapụta nke na - emegharị kwa afọ ka ha nwee ọ greatụ dị ukwuu. Saint Nicholas n'onwe ya na-eleta ha. Mana ọnụnọ Fada Fouettard n'akụkụ ya na-echegbu onwe ya.
Mana, ezigbo bishọp esighi na mpaghara German ndị a. Kedu ka esi kọwaa na ofufe ya gaara emeri obi nke ndị a niile na-amachaghị? A mụrụ Nicolas na narị afọ nke 3 dị anya, na Myra na Asia Minor, ma jiri onwe ya gosipụta onwe ya site n'ọtụtụ mmesapụ aka nke ndụ n'oge ndụ ya. Obi abụọ adịghị ya na ụfọdụ n'ime akụkọ ifo abụghị eziokwu. Aha nke “onye na-enye ihe n’ụba” dị ukwuu ma ọ dịgidere! Ekwuru na ọ zọpụtara obodo ya site na ụnwụ nri yana ndị ọzọ, ndị nọkwa nso, ndị o ji ụgbọ mmiri bujuju ihe oriri rute ha, mgbe chi jiri. Na mgbakwunye, ọ ghọrọ onye nchebe nke ndị ahịa na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ndị ọ gaara azọpụta site na oké ifufe n'ọtụtụ oge. Obodo Myra Maritime bu ebe amaara na Mediterenian, amara ndi nso a gbasasiri na owuwa anyanwu na odida anyanwu. Ọ bụkwa onyeisi ndị mkpọrọ ahụ, n'ihi na ọ hapụrụ ọtụtụ, ya na Saint Yves, ọ na-ekere òkè na ndị ọkàiwu. Na mgbakwunye, maka inye ụmụ agbọghọ atọ dara ogbenye bụ ndị nna ha katọrọ ịkwa iko, na-atụba akpa ego ọla edo na windo abalị atọ n'usoro, ọ ghọrọ onye nlekọta nke di na nwunye ahụ. Mana onye ama ama ya - na obi abụọ adịghị ya akụkọ mgbe ochie - "ọrụ ebube" nke ọtụtụ ndị na-ese ihe megharịrị, bụ nke ịbughachi "obere ụmụaka atọ gara ịtụtụkọta ọka n'ubi", na ajọ onye na-egbu anụ egbutuola iberibe na "Tinye n'ime salting-tub dị ka ezì". Ihe a niile nwere ike ime ka ezigbo bishọp bụrụ onye a ma ama ma ọ bụrụ na ọ bụ otu n'ime ndị nsọ kacha gosipụta na ihe oyiyi okpukpe, ọ nọkwa na abụ. A na-eme oriri nke St. Nicholas na 6 Disemba, ụbọchị e chere na ọ nwụrụ na 343. Na 1087, ndị ahịa Italiantali buuru ozu nke bishọp gaa Bari na Puglia, iji dochie ha maka ndị Turkey na-ekweghị ekwe. Ná ngwụsị nke narị afọ nke 11, Lorrain dị nsọ debere phalanx nke onye nsọ na Port en Meurthe-et-Moselle, nke a mere ka òtù nzuzo ya gbasaa na Europe. Ndị njem njem atụ, gụnyere Joan nke Arc na ọtụtụ ndị eze France, bịara ikpe ekpere na "nnukwu ụka" nke e wuru ebe ahụ. Site n'aka ndị ahịa nke Oké Osimiri Ugwu ma ọ bụ Rhine, nraranye nke onye na-emesapụ aka mụbara n'ihu ma eleghị anya ọ bịara iji kpuchie omenala ndị ọzọ tupu oge Ndị Kraịst. Ezigbo onye bishọp si otú ahụ asọpụrụ na mba ndị ahụ dị na Germany ebe okpukpe oge ochie rubeere Odin isi, nke a na-akpọkwa Wotan. Chi a Odin, bụ isi nke chi ndị Germany, nke na-enwupụta chi, nwere ihe dị mkpa na ọ ga-eji ụkwụ asatọ na-agbagharị n'ụgbọ ịnyịnya ya, Sleipnir, ya na abụọ crows. E jiri ya tụnyere "Savage Hunter" ahụ na-atụ ụjọ, onye na-anya ụgbọ ala, n'abalị oké ifufe na ụbọchị iri na abụọ, otu mkpọtụ na-eme mkpọtụ nke ndị Valkyries ndị ozi ya, nke Perchta, bụ chi nwanyị mbụ nke ọmụmụ tụgharịrị ghọọ mmụọ ọjọọ, na ndị agha nwụrụ anwụ. Onyogho nke bishọp dị ọcha yi uwe uhie ma ọ bụ odo odo, nke nwere nnukwu afụ ọnụ ya na-enye ya amamihe na nsọpụrụ, ejiri nwayọ nwayọ gosipụta nke ndị chi ahụ na ndị na-ekwe nkwa njegharị ụfọdụ njegharị oge oyi nke akpọrọ "nwoke mara mma masked" . Ụdị Santa Claus, bụ onye nwere ọtụtụ n'ime ya, na-ese ugbu a. Nicolas ji ihe acolyte jọrọ njọ nke nwere ihu ojii gbarie ihu, na-eti mkpu, na-atụgharị ma na-eyi ya ụtarị, ihe onyonyo dị ndụ nke ndị na-adịghị mma site n'otu njem oyi. Ụdị ihe mkpuchi abụọ a dị iche iche na-ese onyinyo oge na-atụ egwu na oge egwu, ma ọ bụ n'ụzọ dị iche na nloghachi anya nke ihu igwe dị mma. Na njegharị Switzerland nke Appenzell, Sylvesterkläuse (“Nicholas nke Afọ Ọhụrụ”) gara n’ihu na-egosipụta ọdịiche ndị a n’oge Afọ Ọhụrụ nke Gregorian (December 31) na kalenda Julian (Jenụwarị 12). Mgbe ụfọdụ, anyị na-agbazinye Nna Whipper, nke a na-akpọ Hans Trapp na Alsace, Knecht Ruprecht na Germany ma ọ bụ Krampus dị n'Austria, bụ nke sitere n'aka ụfọdụ ndị akụkọ ihe mere eme. Maka ndị ọzọ, ọ ga - abụ ihe mmụta narị afọ nke iri na asatọ, imenye ụmụ akwụkwọ ụjọ. Na o diri idi egwu, nke ahu bu ihe doro anya, mana okike ya aghaghi tupu. Ndị croquemitaines, dị ka onye na-egbu egbu nke abụ ahụ, na-abụkarị ọnụ ọgụgụ dị ugbu a na agụmakwụkwọ nke ụmụaka, site na nwata. Ihe odide abuo ndi megidere ibe ha, dika Saint Nicholas na Nna Fouettard, gara ndi ezinulo, na mgbede nke iri abali abuo nke onwa December, iji juo umuaka. Mụntakịrị jiri ụjọ zaa ma Bishọp a na-ekesara ha ihe ụtọ ụfọdụ, ebe onye ọchịchịrị ahụ jiri mkpara ya yie ha egwu. Mana ọnọdụ ahụ agbanweela, n'ihi na nleta nke ndị senti na nke valet ya dị ugbu a: ha na-eme n'ụlọ akwụkwọ dịka ọmụmaatụ. Nke a na - eme ka ụmụaka ndị na - emeghị ihe ọjọọ nna Whipper na - Ha echefughi, na mgbede ahụ, itinye akpụkpọ ụkwụ ha n'ọkụ, jiri ahịhịa ma ọ bụ karọt maka ịnyịnya ibu (maka ịnyịnya na Netherlands), ha na-ahụ ebe ahụ achịcha ụtụtụ na-esote. ngwa nri, speculoos ma ọ bụ marzipan, yana obere ihe egwuregwu.
Ọzọkwa, dị ka Saint Nicolas, ndị na-ekesa onyinye na-abụkarị ndị okpukpe, dịka German ma ọ bụ Austrian Child Jesus, ma ọ bụ dịka ndị eze atọ nke Spain. Ihe odide akụkọ ifo ndị a dị ezigbo nso na ụmụaka ma ha na-adị ọnụ ala n'uche ha, dịka Santa Claus nwere ike ịbụ.
Na narị afọ nke 16, Saint Nicolas, onye e lere anya dị ka onye papist dị ukwuu site na Ndozigharị nke katọrọ ofufe nke ndị nsọ, ka nwatakiri Jesus (Christkindel) nọchiri anya ya na mpaghara ndị Protestant. Obodo Katọlik dị ka Austria na Bavaria n'otu aka ahụ ga -ewere mmụọ ozi nke Christkindel a. Ọtụtụ mgbe, ngagharị nke Saint Nicolas bụ onye ọrụ gọọmentị na ọ bụ obodo ahụ dum, nke ndị nta akụkọ gwara, nke na-abịa izute ya na nnukwu ebe. “Oké ịnụ ọkụ” nke ndị na-eto eto na-enye aka ka dị otu! Fada Fouettard ka dị, mana ụmụaka, ọbụlagodi na ha na-atụ egwu ya, anaghịzi eche na ha yiri egwu. Ihe ngosi ndị a na-eme na Satọde ma ọ bụ Sọnde kacha nso na Disemba 6.
Tarana, aha mbụ nke America tupu ọbịbịa nke ndị mmeri
The libero-capitalist system
Okwu mmeghe nke Mandela